Shiinaha Warshad Soo-saare Koronto Koronto Badan iyo soosaarayaasha | Nortech
Waa maxay dhaq-dhaqaaqa korantada ee Multi-turn?
Dhaqdhaqaaqa korantada ee badan HEM taxane waa jiil cusub oo jilayaal koronto oo wejiyo badan leh oo ay soo saareen ayna soo saareen kooxda farsamada ee NORTECH iyadoo lagu saleynayo baahiyaha isticmaalaha iyo sannado khibrad horumarineed leh.
Tilmaamo Main ee Multi-leexo Electric koronto-dhaliye
Naqshadeynta falanqeeyayaasha taxanaha HEM waxay tixgeliyeen arjiga xilliyada ugu adag, qeybaha la isticmaalayna si adag ayaa loo baaray loona tijaabiyey si loo hubiyo isku halaynta muddada dheer ee qalabka. Iyada oo ku saleysan sanado naqshadeyn iyo khibrad soo saarid warshadeed jiheeyaha, jiheeye kasta waxaa lagu kormeeraa lakabka lakabka kahor inta uusan ka bixin warshadda si loo hubiyo hawlgalka muddada-dheer iyo kalsoonida leh ee qabqablaha xaaladaha kala duwan ee shaqada. Jiilka cusub ee hawl-wadeennada wuxuu leeyahay habka xakamaynta ugu habboon; habka waxsoosaarka calaamadaha la xoojiyay wuxuu leeyahay gaashaan buuxa calaamadda faragelinta ee calaamadda xakamaynta; daloolka korantadu wuxuu ku jiraa guryaha aan biyuhu ka xirnayn ee biyuhu xiran yihiin, qalabka wax lagu qoro ee infrared setarana waa la isticmaali karaa. Deji cabbiro kala duwan oo ka mid ah kiciyaha korantada, dhammaan qaybahana waxay buuxiyaan shuruudaha darajada fasalka aan caddeyn karin.
2. Qaabeynta qaab fudud
Xakamaynta iyo qaabeynta softiweerku waa ka fudud yihiin uguna fudud yihiin adeegsigooda, iyadoo la adeegsanayo is-dhexgal cusub oo mashiin-nin ah, jaantusyada garaafka ah way fududahay in la fahmo, oo ay weheliso tilmaamaha hawlgalka ee u dhigma si ay u sahlanaato qaab-u-dhige kasta. Hubinta in halbeegyada si sax ah loo dejiyay iyo ilaalinta nabadgelyadooda ayaa aasaas u ah hawlgal xasilloon. Isku xirnaanta qaabeynta ayaa aad u badan, iyadoo la siinayo xulashooyin kala duwan oo isku xirnaan ah, qaabeyn, ogaanshaha iyo shaqooyin kale, iyadoo la adeegsanayo saxanka dhibcaha sare ee loo yaqaan 'LCD', kaas oo si fudud ugu beddeli kara muujinta Shiinaha iyo Ingiriiska, dadka isticmaala uma baahna inay xusuustaan ​​astaamo badan oo aqoonsi ah, kaliya raac dardargelinta shaashadda. Dib-u-hagaajinta ayaa ku habboon in lala qabsado deegaanno kala duwan oo lagu shaqeeyo.
3. Habab xakameyn badan
The HEM taxanaha jilayaasha badan waxay soo bandhigi karaan shaqooyin kaladuwan oo koontarool kordhin ah iyadoo lagu saleynayo nooca beddelka asalka ah iyo nooca hagaajinta, oo ay ku jiraan basaska kala duwan ee warshadaha sida Modbus-RTU iyo Profibus-DP. Ku habboon baahiyaha xakamaynta ee kala duwan.
4. Is-ogaanshaha iyo shaqada ilaalinta ee saxda ah
Waxay baari kartaa culeyska gawaarida, kuleylka iyo heerka korantada. Waxay sidoo kale si otomaatig ah u aqoonsan kartaa wajiga korontada saddexda waji ah. Ma jiri doono cillad soo noqnoqod ah sababo la xiriira isbeddelada fiilooyinka. Xaaladaha degdegga ah, jiheeyaha ayaa lagu hayn karaa booskiisa ama wuu u carari karaa si uu u hormariyo Xaaladda nabadgelyada ee la dejiyey; dhaqaajiyuhu wuxuu kaloo awood u leeyahay inuu si sax ah u cabiro miisaanka wax soo saarka, uuna ilaaliyo waalka inta lagu jiro hawlgalka si looga hortago in waalka uu ku xirmo; haddii qalabku xayiran yahay, marka la soo diro calaamadda bilowga, ma jiri doonto wax tallaabo ah, wareegga caqliga ayaa ka jari kara mootada si looga hortago in matoorku kululaado oo uu diro calaamadda digniinta;
Faahfaahinta farsamada ee Multi-leexiyaha koronto-dhaliye
Dhaqdhaqaaqa korantada ee badan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo filtarka oo laga dhigo filtarka korontada ku shaqeeya. Waxaa lagu rakibi karaa balaastiga adduunka, fureyaasha albaabka, iwm, iyo bawd weyn oo balaaran, baalal balanbaal ah, fureyaal furan, oo leh qayb ka mid ah qalabka loo yaqaan 'gearbox' si loo yareeyo qiimaha miisaanka, iyadoo la adeegsanayo koronto halkii laga isticmaali lahaa xoog dhaqameed si loo xakameeyo wareegga waalka si loo xakameeyo hawada, biyaha , uumi, warbaahin kala duwan oo wax sunta ah, dhoobo, saliid, biraha dareeraha ah iyo warbaahinta shucaaca. Qulqulka dareeraha iyo jihada
Hore: Qeyb u noqo Qeyb koronto-qabte Qaab Qarxa Nooca LQ
kiciyaha korontada ee waalka waalka